‘न्याय परिषद्‌बाट प्रधानन्यायाधीशलाई बिदाइ गरौं, संसदीय सुनुवाइ हटाउँ’ « Harekpal
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै यतिबेला न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छन् । तर, न्याय परिषद् भने मौन छ । सर्वोच्चसहित सबै तहका न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, न्यायाधीशहरूविरुद्धको उजुरी सुन्ने, कारबाहीको सिफारिस गर्ने बलियो संयन्त्र हो, न्याय परिषद् । यस्तो बेला न्याय परिषद्ले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? वर्तमान गतिरोधको निकास के हो ? लगायतका विषयमा कृष्ण उप्रेतीले न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खेमनारायण ढुंगानासँग कुराकानी गरेका छन् ।
यी दुईबाहेक कुनै विकल्प छैन । तर, महाभियोगको लागि दलहरू तयार छैनन् किनकि उनीहरू पनि यसमा मुछिएका छन् । दलहरूले मौनता साँध्नुको पछाडि उनीहरू पनि अपराधी छन् नि त ।
२०६२ सालदेखि नेपालको न्यायालयमा पटकपटक राजनीतिक विवाद देखिँदै आएको छ । हरेक प्रधानन्यायाधीशहरू केही न केही खोट बोकेरै बाहिरिएका छन् । यसमा हाम्रो नियुक्ति प्रक्रियामा नै खोट हो कि राजनीतिक दलहरूबीचको स्वार्थ हाबी भएको हो ? वा प्रधानन्यायाधीश भएर आउने व्यक्तिहरूमा महत्वकांक्षा बढी भएको हो ?
न्याय परिषद्का सबै सदस्यहरू संसदीय सुनुवाइबाट आउनुपर्छ । न्यायाधीशहरू संसदमा सुनुवाइ गर्न जाने बित्तिकै कुनै न कुनै राजनीतिक दलको प्रभावमा परेरै जान्छन् । अरुको शरणमा नपरी उनीहरू उम्किनै सक्दैनन् । संसदीय सुनुवाइमा जब न्यायाधीश जान्छ, संसदभित्रका सांसद या पार्टीका मान्छेलाई रिझाउन पर्‍याे त्यसको लागि पार्टीको ढोकामा पुग्नुपर्‍यो । त्यसैले न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गर्नु उचित होइन ।
‘क्यान आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री भाे’ – बोर्ड..
सेयर बजार ५६ दशमलव ७३ अंकले बढ्यो नेप्से
पार्टीको काम निष्ठापूर्वक गरी आएको छु, यसपालि महामन्त्री..
केपी ओली रहँदासम्म अध्यक्षमा अरु विकल्प छैन, म..